ပို့စ်ကို ရေးသားသူ yamin အချိန် Saturday, December 31, 2011 1 comment: Links to this post
ပို့စ်ကို ရေးသားသူ yamin အချိန် Thursday, December 15, 2011 No comments: Links to this post
ပို့စ်ကို ရေးသားသူ yamin အချိန် Thursday, December 15, 20112comments: Links to this post
ပို့စ်ကို ရေးသားသူ yamin အချိန် Monday, October 31, 2011 No comments: Links to this post
2600th Anniversary of Shwedagon Pagoda
The Shwedagon Pagoda, Myanmar's century-old holiest Buddhist edifice
as well as the most prominent landmark of the country, will complete
2600th year of its existence in the coming year 2012.
The Pagoda, according to time-honoured tradition, has four kinds of
relics of the four Buddhas: the eight hair strands of Gotama; the
walking stick of his predecessor Buddha; the water filter and
yethanoke (a waistcloth used for bathing in)respectively of the two
Buddhas, the predecessors of the Buddhas. The 2600th anniversary
celebrations will be held on the fullmoon day of Tabaung(March) at all
the four entrances to the Pagoda with all the rites and rituals
befitting suchagreat event.
ပို့စ်ကို ရေးသားသူ yamin အချိန် Monday, October 24, 2011 No comments: Links to this post
"Tick" The clock says, "Tick Tick, Tick"
Time is running fast away;
We must work, and work To-Day,
Wait not for another Tick;
ပို့စ်ကို ရေးသားသူ yamin အချိန် Saturday, October 15, 2011 No comments: Links to this post
ံ့He who asksaquestion isafool for five minutes, but he who does
not ask remainsafool forever. (Chinese Proverb)
မေးခွန်းမေးသောသူသည် ငါးမိနစ်အရူးဖြစ်သည်။ မေးခွန်းမမေးသောသူသည်
သင်အမှားမပြုလုပ်နိုင်လျှင် သင်ဘာမျှ မပြုလုပ်နိုင်ပါ။
Study while others are sleeping; work while others are loafing;
prepare while others are playing; and dream while others are wishing.
အခြားသူများအိပ်စက်စဉ် ပညာဆည်းပူးပါ။အခြားသူများ လျှောက်သွားစဉ်
အလုပ်လုပ်ပါ။အခြားသူများ ဆော့ကစားနေစဉ် ပြင်ဆင်ပါ။အခြားသူများ
Concentrate all your thoughts upon the work at hand. The sun's rays do
not burn until brought toafocus.(Alexander Graham Bell)
အပြုံးတစ်ခုသည် အမှောင်ဆုံးနေ့ကိုပင် ထိန်လင်းစေနိုင်သည်။
Always laugh when you can; it is the cheapest medicine.
ရယ်နိုင်သမျှအမြဲရယ်မောပါ။ ၄င်းသည် ဈေးအပေါဆုံး ဆေးဝါးဖြစ်သည်။
Learn all you can from old people.They've gone over the road you must travel.
သက်ကြီးရွယ်အိုများထံမှ ပညာဆည်းပူးပါ။ သင်လျှောက်လှမ်းရမည့်လမ်းကို
Love life and life will love you back.Love people and they will love you back.
ဘ၀ကို ခင်တွယ်ပါ။ဘ၀က သင့်ကိုပြန်၍ခင်တွယ်ပါလိမ့်မည်။ လူသားများကို
ခင်တွယ်ပါ။လူသားများက သင့်ကိုပြန်လည် ခင်တွယ် ပါ လိမ့်မည်။
သင်သည် အချိန်နာရီကို နောက်ကြောင်းပြန်၍ မရနိုင်သော်လည်း
Wise people learn while they can; fools when they must.
ပညာရှိတို့သည် သူတို့တတ်နိုင်တုန်း ပညာကိုသင်ယူကြသည်။လူမိုက်တို့သည်
မသင်မဖြစ် အခြေအနေရောက်မှသာ ပညာကို သင်ယူ ကြသည်။
Nobody is perfect. That's why penciles have erasers.
မည်သူမျှ ပြီးပြည့်စုံသည်မရှိ။ ထို့ကြောင့် ခဲတံများတွင်
He who thinks himself to suit everyone will soon whittle himself away.
လူတကာ အဆင်ပြေရလေအောင် မိမိကိုယ်မိမိ ပြုပြင်ပေးသူသည်
ကလေးငယ်တစ်ဦးသည် ပညာရှိတစ်ယောက်ဖြေနိုင်စွမ်း မရှိနိုင်လောက်အောင်
မေးခွန်းများ မေး နိုင်သည်။
ပို့စ်ကို ရေးသားသူ yamin အချိန် Saturday, October 01, 2011 No comments: Links to this post
In all the way you can.
အမြဲတမ်း တတ်နိုင်သမျှ လုပ်ပေးပါ။
လူတိုင်းကို တတ်နိုင်သမျှ အကျိုးဆောင်ပေးပါ။
ပို့စ်ကို ရေးသားသူ yamin အချိန် Sunday, September 25, 2011 1 comment: Links to this post
ရောင်းပန်း၊ ၀ယ်ပန်းလှပြီး လာဘ်ပွင့် ကံမြင့်ဂါထာတော်
ဂါထာတော်ကို မနက်အိပ်ရာထ (၂၇) ခေါက်၊ နေ့လယ် (၂၇) ခေါက်၊ ညအိပ်ရာဝင် (၂၇) ခေါက် (၉) န၀င်းကျေ ရွတ်ရပါမယ်။ ရောင်းပန်းသာလို့ ၀ယ်ပန်းလှပြီး အရောင်းအ၀ယ်လုပ်ငန်းများ ပိုမိုအဆင်ပြေလာစေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ လာဘ်ပွင့်ကံမြင့်တယ်။ မှန်မှန်ရွက်ဆိုဖို့၊ ယုံကြည်စွဲမြဲစွာ ရွတ်ပြီး မမေ့မလျော့ မပေါ့တဲ့ သတိရှိဖို့ပဲ လိုပါတယ်။
ဧဟိ လာဘံ ပိယံ မမ
ဧဟိ သုခံ ပိယံ မမ
ဧဟိ လာဘံ ဧဟိ ဓနံ ဧဟိ သုခံ ပိယံ မမ
လာဘံ လာဘတု သဗာဒါ
ပို့စ်ကို ရေးသားသူ yamin အချိန် Thursday, September 15, 2011 No comments: Links to this post
အကြောင်းအရာက: အကျိုးများစေဖို့ ဂါထာတော်ကို ရွတ်ကြစို့
ပို့စ်ကို ရေးသားသူ yamin အချိန် Sunday, July 10, 2011 No comments: Links to this post
ငါလျှင် ကြည်ညိုမိပါ၏ ။
" ဗုဒ္ဂပေးသော ဒေါသငြိမ်းဆေး "
ရန်ကို ရန်ချင်း တုံ့ပြန်နှင်း
ဓမ္မပဒ ၊ ယမကဝဂ် ဝတ္တု
ပို့စ်ကို ရေးသားသူ yamin အချိန် Sunday, June 19, 2011 No comments: Links to this post
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များအတွက် ဈေးကွက်ဖော်ဆောင်ရေး လုပ်ငန်းစဉ် အပိုင်း ၁
အရင် ပြောချင်တာကတော့ မားကက်တင်းဆိုတာ ဘာလဲ။ Marketing ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့
ဈေးကွက်ဖွင့်ခြင်းဆိုတာကို ဖော်ဆောင်တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲ
ဈေးကွက်ဖွင့်တယ်ဆိုတာရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်က တကယ်လိုတာထက် ပိုပြီး
ရောင်းချနိုင်ရေးနှင့် လူသိများရေးကို ပြောခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဈေးကွက်ဖွင့်ခြင်းဆိုတာ ရောင်းချခြင်း၊ ဖြန့်ဖြူးခြင်း၊
ကြော်ငြာခြင်းနဲ့ ရောင်းအားတိုးတက်အောင် လုပ်ခြင်းဆိုတဲ့ ဆောင်ရွက်မှုတွေ
ဖြစ်တယ်။ ကုန်ထုတ်လုပ်ဖို့ စီမံလျာထားခြင်းနဲ့ ဈေးကွက်ကို စူးစမ်းလေ့လာ
သုတေသနလုပ်တာတွေလည်း ပါပါတယ်။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုရဲ့
အဲဒီဆောင်ရွက်မှုတွေမှာ စားသုံးသူနဲ့ တိုက်ရိုက်ထိတွေ့ဆက်ဆံရတာတွေ
ပါဝင်တယ်။ သူတို့ရဲ့ လိုအင်ဆန္ဒတွေကို အကဲဖြတ်တာပါတယ်။ အဲဒီဆောင်ရွက်မှုက
ရရှိတဲ့ သတင်းစကားတွေကို ရောင်းချဖို့အတွက် ထုတ်လုပ်တဲ့ ကုန်စည်နဲ့
(၀န်ဆောင်မှု)တွေအဖြစ် ဘာသာပြန် အသွင်ပြောင်းပေးခြင်း ဖြစ်တယ်။
ဒီလိုအသွင်းပြောင်းရာမှာတော့ မိမိတို့ ကုမ္ပဏီ သို့မဟုတ်
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရဲ့ ဦးတည်ချက်တွေနဲ့ အညီအညွတ်ဖြစ်အောင် လုပ်ရမှာ
ဒီလိုပါပဲ။ ဈေးကွက်ဖွင့်တဲ့ လူတွေက သူတို့လုပ်နေတဲ့
ထုတ်ကုန်တွေအကြောင်း၊ အမှတ်တံဆိပ်တွေအကြောင်း ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်း
ဆောင်ရွက်ပေးမှုတွေအကြောင်း ပြောလေ့ရှိကြတယ်။ ဘာတွေလဲဆိုတော့
၁။ ထုတ်ကုန် (Product) ဆိုတာ ထုတ်လုပ်တဲ့အမျိုးအစားတစ်ခုခုပါပဲ။
ထုတ်လုပ်ရောင်းချတဲ့ ပစ္စည်းဆိုလည်း မမှားပါဘူး။
၂။ အမှတ်တံဆိပ် (Brand) ဆိုတာ ထုတ်ကုန်တစ်မျိုး သို့မဟုတ်ရင်လည်း
ထုတ်ကုန်အမျိုးအစားတစ်စုကို အမှတ်အသားပြုထားတာဖြစ်တယ်။ နောက်တစ်ချက်ကတော့
၃။ ဆောင်ရွက်မှု (Service) ဆိုတာ အစဉ်အလာဖြစ်နေတာက လူကို အရင်းပြုပြီး
လုပ်ကိုင်ပေးတဲ့ ဆောင်ရွက်မှု (၀န်ဆောင်မှု) တွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
မားကက်တင်းကို အပိုင်း ၄ ပိုင်းနဲ့ လေ့လာသုံးသပ်သွားမယ်ဆိုရင် သင်ရဲ့
လုပ်ငန်းဟာ တစ်ရှိန်ထိုး အောင်မြင်ကျော်ကြား ထွန်းပေါက်လာနိုင်မယ်လို့
ကျွန်မ ရဲရဲကြီး ပြောလိုက်ပါရစေ။ ဒါတွေက ဘာတွေလဲ။ သင် သိချင်သလား။ ကဲ
၄။ ကျင့်သုံးဆောင်ရွက်ခြင်း (လက်တွေ့လုပ်ဆောင်ခြင်း) ဆိုပြီး အပိုင်း ၄
ပိုင်းနဲ့သာ လုပ်ဆောင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်.............. အကျိုးဆက်က
ဘာတွေဖြစ်ပေါ်လာမလဲ။ ကျွန်မ ပြောနေရုံနဲ့ သင်တို့ အောင်မြင်မယ်လို့
ထင်နေပါသလား။ တကယ် လက်တွေ့ လုပ်ဆောင်မှသာ လိုချင်တဲ့
အောင်မြင်မှုပန်းတိုင်ကို ရောက်ရှိမှာပေါ့ ဟုတ်ဖူးလား။ ဒီအပိုင်း
တစ်ပိုင်းချင်း ဆောင်ရွက်ပုံနည်းလမ်းကို သီးခြားစီ စဉ်းစားဆုံးဖြတ်တာတော့
ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အဲ တစ်ချက်တည်းကိုသာ ကျင့်သုံးရုံနဲ့တော့ ဘာမှ
ကိုယ့်လုပ်ငန်းအခြေအနေနဲ့ ၀ယ်မယ့်သူတွေ(စားသုံးသူတွေ) ရဲ့ အခြေအနေကို
စူးစမ်းဖော်ထုတ်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ့်လုပ်ငန်း အနေအထားကို
တိတိကျကျပေါ်လွင်အောင် အတွင်းပိုင်း ပြန်ကြည့်တာကနေ စတင်သင့်ပါတယ်။
တစ်နည်းပြောရရင် စာရင်းစစ်တယ်လို့လည်း ပြောလို့ရပါတယ်။
- ကိုယ့်ကုမ္ပဏီ ကိုယ့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းက ဘာကိစ္စမှာ ကောင်းတာလဲ?
- ကိုယ့်အားသာချက် (s) နဲ့ အားနည်းချက် (w) တွေက ဘာလဲ?
- ဈေးကွက်အခွင့်အလမ်းတွေ (o) ဘယ်လိုအခြေအနေရှိသလဲ?
- ကိုယ့်အတွက် စိုးရိမ်စရာဖြစ်အောင် ခြိမ်းခြောက်နေတာတွေ (T) က ဘာတွေလဲ?
S က Strength လို့ အဓိပ္ပာယ်ရပြီး ကျန်တဲ့ W က Weakness။ O က Market
Opportunities။ T က Threats။ အဲဒီလို အတိုကောက်မှတ်သားပြီး
တစ်စုတစ်စည်းတည်း SWOT လေ့လာဆန်းစစ်မှုလို့ ခေါ်ဆိုသုံးနှုန်းလေ့ရှိကြပါတယ်။
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေအနေနဲ့ သိကြမယ်လို့လည်း ကျွန်မ မြင်မိပါတယ်။
SWOT ဆိုတဲ့ ဝေါဟာရ ကိုယ်တိုင်က သေရေးရှင်ရေးလို အလွန်အရေးကြီးတဲ့
ကိစ္စရပ်တွေ ပညာရပ်၊ ဘာသာရပ်တွေကို အပြင်းအထန် လေ့လာသည်၊ လေ့လာခြင်း၊
လေ့လာသူလို့ ကြိယာအနေနဲ့ရော နာမ်အနေနဲ့ပါ အဓိပ္ပာယ်ရှိနေတယ်။ ဒါကြောင့်
SWOT လို့ မှတ်ထားရင် ပိုပြီး မှတ်မိလွယ်သွားပါတယ်။ နောက်တစ်နည်းက SWOT
Analysis လို့ တွဲပြောရပါတယ်။ ဒီနယ်ပယ်မှ မဟုတ်ပါဘူး။ ခုလက်ရှိ Develop
ဖြစ်ဖို့ ကြိုးစားနေတဲ့ သူတိုင်း ICT Develop မှာပါ SWOT Analysis ဟာ
မပါမဖြစ် အရေးပါတဲ့ အခန်းကဏ္ဍကနေ ပါဝင်နေလို့ပါပဲ။ ခု ကျွန်မ
အိုင်စီတီနဲ့ပတ်သက်ပြီး ပရောဂျက်တွေ ဆော့ဝဲတွေ ကျောင်းမှာ လုပ်ရတော့ SWOT
Analysis ကို ပိုမို သိရှိလာမိပါတယ်။
နောက်တစ်ဆင့်ကတော့ ဈေးကွက်သုတေသန လုပ်ရပါမယ်။ ၀ယ်သူတွေရဲ့ လိုအင်ဆန္ဒကို
ရှာဖွေကြည့်တာပါပဲ။ သူတို့ ဘာအလိုရှိနေကြသလဲပေါ့။ အဲဒါလုပ်ပြီးရင်
ကိုယ့်လုပ်ငန်းအခြေအနေနဲ့ သူတို့ရဲ့ လိုအင်ဆန္ဒကို ယှဉ်တွဲ
သုံးသပ်ကြည့်နိုင်ပါပြီ။ အဲဒီလို တိုက်ကြည့်လိုက်တော့ ကွာဟမှု
လေ့လာဆန်းစစ်ချက် (Gap Analysis) ကို ရရှိပါတယ်။ ဒီလိုပြောတာက
ပညာရပ်အသုံးအနှုန်းနဲ့ပြောတာပါ။ ရိုးရိုးနဲ့ ရှင်းအောင် ဆိုရင်တော့ ကိုယ်က
ထုတ်လုပ်ရောင်းချပေးနေတာနဲ့ ၀ယ်သူတွေ အလိုရှိနေတာအကြား
ခြားနားကွာဟချက်ကို သိနိုင်လာတယ်ပေါ့။ ဟုတ်တယ်နော်။ အဲဒီကွာဟမှုကို သိရရင်
အဲဒီကွာဟနေတာ စေ့သွားအောင် ကိုယ်က ကြိုးစားရတော့မယ်။ ၀ယ်သူက
အမြဲမှန်နေတာလို့ ခံယူရမှာကိုး။ ဒီတော့ ကွာဟကွဲလွဲနေရင် ကိုယ်က
ပြင်ရမှာပေါ့။ ကိုယ်က မပြင်ရင် သူနဲ့ကိုက်တဲ့လူဆီ ရောက်သွားမှာပဲပေါ့။
ဒါပေမယ့် တကယ်တမ်းကျတော့ ဈေးကွက်ဖွင့်ကြတဲ့အခါမှာ စနစ်တကျ
အချက်အလက်တွေနဲ့ တွက်ချက်ရေးဆွဲ ဆောင်ရွက်သူမျိုး တော်တော်ရှားတတ်ပါတယ်။
ကိုယ့်မှာ ကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်တဲ့ လုပ်ငန်းရှိတယ်။ ကိုယ့်မှာ ခန့်ထားတဲ့
၀န်ထမ်း၊ အလုပ်သမားတွေရှိတယ်။ ကိုယ့်မှာ အရင်းအနှီး လုပ်ဖို့
ငွေကြေးလည်းရှိနေတယ်။ ဒါတွေသာ ပြည့်စုံနေပြီဆိုရင်
ကိုယ်သွားမယ့်ပန်းတိုင်တစ်ခုကို ချိန်ရွယ် ရည်မှန်းရပါလိမ့်မယ်။
ဒီလိုလုပ်တာဟာလည်း အစစအရာရာ အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်အောင် လုပ်တာ မဟုတ်ပါဘူး။
တကယ်လည်း မလုပ်နိုင်သေးပါဘူး။ ကိုယ့်မှာရှိပြီးဖြစ်တဲ့ စွမ်းအား
အရင်းအမြစ်တွေနဲ့ လက်တွေ့ကျကျ ကိုယ်တစ်နိုင်တစ်ပိုင် အံဝင်မှု
အဖြစ်နိုင်ဆုံးပန်းတိုင်ကို ရွေးချယ်ရတာ ဖြစ်ပါတယ်။
မားကက်တင်းဆိုတာကလည်း ကိုယ့်ထုတ်ကုန်ပစ္စည်း သို့မဟုတ် ကိုယ့်
၀န်ဆောင်ပေးမှုတွေကို ဖြစ်နိုင်သမျှ အများဆုံး ရောင်းရအောင်
နေရာချထားပေးခြင်းနဲ့ ထုပ်ပိုးပေး ထားခြင်းသာ ဖြစ်တယ်။ ဒါကိုပဲ
နည်းလမ်းပေါင်းစုံနဲ့ လုပ်နေကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်တမ်း
အရေးကြီးဆုံးအချက်ကတော့ ကိုယ်ထုတ်လုပ်ရောင်းချ ဆောင်ရွက်ပေးတဲ့
ကုန်ပစ္စည်းတွေနဲ့ ၀န်ဆောင်မှုတွေကို ၀ယ်ယူအားပေးနေကြတဲ့ စားသုံးသူတွေရဲ့
အကြောင်းကို သိရှိနားလည်တာဟာ မားကက်တင်း ခေါ် ဈေးကွက်ဖွင့်ခြင်းပဲ
ဖြစ်ပါတော့တယ်။ အဲ အမှန်ပြောရရင် စားသုံးသူတွေကို နားလည်ခြင်းဆိုရင်
ပိုမှန်မယ် ထင်ပါတယ်။ နားလည်ရာမှာ သူတို့ ဘာတွေလိုအပ်နေသလဲနဲ့
သူတို့ဘာတွေလုပ်ချင်နေကြသလဲဆိုတာကို ခွဲခြားနားလည်ရမှာလို့ ကျွန်မတော့
မြင်မိပါတယ်။ ဗျူဟာအခင်းအကျင်းကို အပိုင်း ၂ မှာ ဆက်လက်
ပို့စ်ကို ရေးသားသူ yamin အချိန် Friday, June 10, 2011 1 comment: Links to this post
Macquarie University သို့ တိုက်ရိုက်တက်ရောက်နိုင်မည့် ပညာရေးဆွေးနွေးပွဲ ဇွန်(၅)ရက်နေ့တွင် ကုန်သည်ကြီးများဟိုတယ်၌ မွန်းလွဲ(၁)နာရီမှ (၃)နာရီထိ ပြုလုပ်မည်
သြစတြေးလျနိုင်ငံ New South Wales ပြည်နယ် ဆစ်ဒနီမြို့ရှိ Navitas ၏ Sydney Institute of Business and Technology (SIBT) မှတဆင့် ဆစ်ဒနီ မြို့တွင် ထိပ်တန်းတက္ကသိုလ်တစ်ခုဖြစ်သော Macquarie University နှင့် Macquarie City Campus တို့သို့ တိုက်ရိုက်တက်ရောက်ခွင့်ရရှိနိုင်မည့် ပညာရေးဆိုင် ရာ ဆွေးနွေးပွဲတစ်ရပ်အား (၂၀၁၁)ခုနှစ်၊ ဇွန်လ (၅) ရက်၊ တနင်္ဂနွေနေ့တွင် ကုန်သည်ကြီးများဟိုတယ်၊ တောင်ငူခန်းမ၌ မွန်းလွဲ (၁)နာရီမှ (၃)နာရီထိ ကျင်းပပြုလုပ် သွားမည်ဖြစ်ကြာင်း Navitas' Authorized Representative ဖြစ်သည့် AT&S Co.,Ltd. မှ သိရှိရပါသည်။
SIBT ၏ ပညာရေးဆွေးနွေးပွဲတက်ရောက်လိုသူ ကျောင်းသားမိဘများအနေဖြင့် ကြိုတင်စာရင်းပေးသွင်းရန် လိုအပ်ပြီး စာရင်းပေးသွင်းခြင်းနှင့် ပညာရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များကို မေးမြန်းတိုင်ပင်လိုပါက AT&S Co.,Ltd.အဆောင်(၅) ၊ အခန်း(၄)၊ မြန်မာအင်ဖိုတက်ခ်၊ လှိုင်တက္ကသိုလ်နယ်မြေ၊ ရန်ကုန်မြို့၊ ဖုန်း-၅၂၁၁၂၅၊ ၆၅၂၂၈၈၊ ၆၅၂၃၂၀ တို့သို့ ဆက်သွယ် စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပြီး အီးမေးလ်ဖြင့် စာရင်းပေးသွင်းလိုပါကလည်း ဆွေးနွေးပွဲတက်ရောက်မည့်သူ၏ အမည်၊ ပညာအရည်အချင်း၊ ဆက်သွယ်ရမည့် ဖုန်းနံပါတ်တို့နှင့်အတူ ပေးပို့နိုင်ကြောင်း သိရှိရသည်။
ပို့စ်ကို ရေးသားသူ yamin အချိန် Wednesday, June 01, 2011 No comments: Links to this post
ပရိနိဗ္ဗာန်စံသောနေ့ (ကဆုန်လပြည့် အင်္ဂါနေ့)
ပို့စ်ကို ရေးသားသူ yamin အချိန် Tuesday, May 17, 2011 No comments: Links to this post
မဟာသက္ကရာဇ် (၁၄၈) ခုနှစ်၊ ကဆုန်လပြည့် အင်္ဂါနေ့တွင် ကုဿိန္နာရုံ အလုံးစုံသော သင်္ခါရတရားတို့ ချုပ်ငြိမ်းရာ ပရိနိဗ္ဗာန်ပြုတော်မူသည်။မေတ္တာရိပ်မှ ကောက်နှုတ်ဖော် ပြပါတယ်
စာရေးဆရာ နတ်နွယ် (၁၉၃၃-၂၀၁၁) ကွယ်လွန်ပြီ
ယမန်နေ့ မနက်ပိုင်း ၁၀ နာရီ ၄၅ မိနစ်တွင် ၉၆ ပါးသော ရောဂါဖြင့်
ဦးနတ်နွယ်(၇၉ နှစ်) ရဲ့ဘ၀အကြောင်းများကတော့
၁၉၃၃-ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁ ရက်နေ့တွင် ကချင်ပြည်နယ်၊ မြစ်ကြီးနားမြို့၌
အဖကုန်သည် ဦးဘ၀မ်း၊ အမိ ဒေါ်စောလုံတို့က မွေးဖွားသည်။
တစ်ဦးတည်းသောသားဖြစ်၍ အမည်ရင်းမှာ ဦးလှမြင့် ဖြစ်သည်။
၁၉၃၉-၄၆ - မြစ်ကြီးနား တောင်းဖန်း အစိုးရ အထက်တန်းကျောင်း၌ တတိယတန်းအထိပညာသင်ခဲ့။
၁၉၄၆-၅၃ - ရန်ကုန်နှင့်မန္တလေးကျောင်းသားလူငယ် လှုပ်ရှားမှုများတွင်ပါဝင်ခဲ့သည်။
၁၉၅၀ - ဇွန် ၂၈ ထုတ် ဟံသာဝတီသတင်းစာတွင် ''ကျောင်းသူမ'' ကဗျာကိုရေး၍
၁၉၅၁-၅၃ - အထက်ဗမာနိုင်ငံ ကလောင်သစ်လူငယ်များ အဖွဲ့ ချုပ်အမှုဆောင်။
၁၉၆၀ - ''အ၀ါ'' ၀တ္ထုထွက်။ ကမ္ဘာပတ်လည်ရက်ရှစ်ဆယ် (ဘာသာပြန်)ထွက်။
ချစ်သူရှိသောမြို့၊ ရတနာလှိုဏ် ဂူ၊ သန္တာကျွန်း(ဘာသာပြန်)၊
အနောက်မိုးကုပ်စက်ဝိုင်း၊ အပျံသင်စ စသောစာအုပ်များထွက်။ လှမြင့်
အမည်ဖြင့် အကယ်ဒမီအင်္ဂလိပ်၊ မြန်မာသရုပ်ဖော် အဘိဓာန်''ထွက်ခဲ့။
၁၉၆၁ - ''လျှို့ဝှက်သဲဖိုမဂ္ဂဇင်း'' တည်ထောင်သူနှင့် စာတည်း။
''ညဈေးတန်းအစ''၊ ''ဇာတ်သမ အလယ်'' ''တမင်သက်သက်'' ''တ၀ဲလည်လည်''
''နှမထွေးမယ့်ကိုလိုလျှင်'' ''ရှက်စဖွယ်'' (ဘာသာပြန်)
''ရွှေဖလားနှင့်မိုးခါး ရေ'' ၀တ္ထုများထွက်။
၁၉၆၂ - ''တစ်ကွေ့တော့ ကြဦးမည်'' ''မှုခင်းစုံထောက် ကိုယ်တွေ့မှတ်တမ်း''၊
''မိုးညဖြူဖြူ'' ''၀င်္ကပါ'' ''တက္ကသိုလ်နှင့် ပြင်ပကမ္ဘာ''
၁၉၆၃ - ''အမျိုးသားသတင်းစာ'' ဘာသာပြန်အယ်ဒီတာ။ ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံ
၁၉၆၄ - ''ရောမက မိန်းမပျက်'' (ဘာသာပြန်) ကျောက်ဘီလူး၊ တစ်ဆယ် (မိုးဝေ
၁၉၆၅ - တနေ့မဟုတ်တစ်နေ့၊ အနီးအဝေး အနိမ့်အမြင့်၊ အရှေ့မိုးကောင်းကင်
(ဘာသာပြန်)နှစ်တွဲ။ အုံးအုံး ကျွက်ကျွက် စသောစာအုပ်များထွက်။
၁၉၆၇ - စုံထောက်မဂ္ဂဇင်းအယ်ဒီတာ။ မီးခိုးမဆုံးမိုးမဆုံး၊
မြန်မာပြည်မြောက်ပိုင်း (အတွဲ-၂)၊ အပြာအ၀ါစ သောစာအုပ်များထွက်။
၁၉၆၈ - မိုးဝေမဂ္ဂဇင်း တာဝန်ခံအယ်ဒီတာ။ ကမ္ဘာရန်(ဘာသာပြန်)။ လကွယ်နေ့ည
၁၉၆၈ - ၇၃ - မင်းကျော်နှင့်တွဲ၍ ''မလိခ''အမည်ခံယူကာ ''မြန်မာ ၀တ္ထု
၁၉၆၉ - မောင်နေ၀င်း၊ မင်းကျော်တို့နှင့်တွဲ၍ ''တော်လှန် စာပေ''
''တော်လှန်စာပေ အတွေးအမြင်'' စာအုပ်များ ရေးခဲ့။
အရှေ့စူးစူးအနောက်ယွန်းယွန်း၊ ကုသိုလ်တစ်ပဲ ငရဲတစ်ပိဿာ စာအုပ်များထွက်။
၁၉၇၂ - တံခွန်တိုင်မောင်နှမများ၊ နန္ဒ၀န်သို့အပြန်၊
နန်းစပယ်နှင့်တစ်ယောက်ပြီးတစ်ယောက်၊ မျက်တောင် ကော့နဲ့ မျက်ထားညို
စသောဝတ္ထုများ၊ သီတာခုနစ်တန် တောင်စဉ်ခုနစ်ထပ်(ခရီးသွား)
သည်ခေတ်နှင့်သည်မောင် နှမများ-စာအုပ်များ ထွက်။
၁၉၇၃ - ချစ်သူနှင့်တစ်ခဏ မုန်းသူနှင့်တစ်ဘ၀၊ တစ်ယောက်က မာယာ၊
နန်းသက်မွန်နှင့် မျက်နှာစိမ်းများ၊ မသန္တာမသိပါ၊ မျက်နှာမှာအပြုံး၊
မျက်လုံးမှာဒေါသ၊ ရန်သူတစ်ရာ မိတ်ဆွေတစ်ယောက်၊ စသောဝတ္ထုများထွက်သည်။
၁၉၇၄ - ကေသရာဇာ၊ ကျွန်မအသက် သပြေခက်၊ တစ်ပင်ကို နှစ်ပင်ယှက်တယ်၊
အရုပ်နဂါး အရုပ်ကျား၊ အလည်လာတဲ့ မိန်းခလေးရယ်၊ သိင်္ဂီတစ်ဝက် ရွှေတစ်ဝက်
၁၉၇၅ - မပြီးဆုံးသေးသောည၊ ပြာပြာညိုရောင် မှိုင်းတလဲ့လဲ့၊
ကျားမျက်လုံးနဲ့ကြောင်မျက်နှာ၊ ကျော်ဇေယျနှင့် သံကွန်ခြာ ခုနစ်ထပ်
၁၉၇၆ - နောက်ဆုံးတစ်နေ့ နောက်ဆုံးကမ္ဘာ။ နွဲ့ဝါ၊
၁၉၇၇ - ကုဋေကုဋာသိန်းသန်းတန်တော့တယ်။ ဘယ် ယိမ်း ညာနွဲ့ ဘယ်ပြန်နွဲ့၊
လေကစား ကြွားတလူလူဝေ စသော ၀တ္ထုများထွက်။
နောက်ပိုင်း ခုနှစ်များတွင်လည်း ၀တ္ထုများဆက်ထွက်ခဲ့သည်။ ပင်ကိုယ်ရေးဝတ္ထု၊
အမှီးဝတ္ထု၊ ဘာသာပြန်ဝတ္ထု၊ ခရီသွား စာပေ၊ 'မိမိနှင့်စာရေးဆရာများ'
ကဲ့သို့သော ရုပ်ပုံလွှာအဖွဲ့များ ဝေဖန်ရေးစာပေ ဆောင်းပါး စသည်ဖြင့်
စာပေအမျိုးအစား အတော်စုံစုံ ရေးသားခဲ့သည်။ နွယ်နီမဂ္ဂဇင်း တည်ထောင်သူနှင့်
အယ်ဒီတာချုပ်အဖြစ် ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ ''ကာရာမာဇော့ ညီအစ်ကိုများ''
စာအုပ်ဖြင့် (၂၀၀၂-ခု၊ အမျိုးသားစာပေ ဘာသာပြန်စာပေဆု) ရရှိခဲ့သည်။
ပင်ကိုရေးလုံးချင်းအုပ် ၁၀၀ ခန့် ဘာသာပြန်လုံးချင်း ၂၀ ကျော် ရေးသားခဲ့။
မိုးဇော်ဟိန်း အမည်ဖြင့်လည်း လုံးချင်းဝတ္ထု ဘာသာပြန်များ ရေးခဲ့သည်။
ကလောင်အမည်ခွဲ ၁၄ ခုခန့်ရှိသည်။
ဆရာကြီး နတ်နွယ်ရဲ့ ထင်ရှားသော စာအုပ်အချို့မှာ
(၁) မြန်မာပြည် မြောက်ပိုင်း (၂-တွဲ)
(၈) သီတာခုနစ်တန် တောင်စဉ် ခုနှစ်ထပ် (ခရီးသွား)
(၉) မြန်မာဝတ္ထုအညွှန်း (မလိခအမည်ဖြင့် မင်းကျော်နှင့်တွဲရေး)
(၁၀) နွယ်နီ နိုင်ငံတကာ အဘိဓာန် (၁၉၉၄)
စာအုပ် အတော်များများသည် ပုဂံစာအုပ်တိုက်မှ ထွက်ရှိခဲ့တာ များပါသည်။
ယမင်း စုဆောင်းထားသော စာအုပ်များကတော့ မိုဗီဒစ်၊ သီတာခုနစ်တန် တောင်စဉ်
ခုနစ်ထပ်၊ မြန်မာဝတ္ထုအညွှန်းပေါင်းချုပ်၊ ဂျက်လန်ဒန်၊
ပို့စ်ကို ရေးသားသူ yamin အချိန် Thursday, May 12, 2011 No comments: Links to this post
သင့်ဆန္ဒနှင့် ကိုက်ညီမည့်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကို ရွေးချယ်လိုက်လျှင်လိုက်ခြင်း ထိုအဖွဲ့အစည်းတွင် ကိုယ့်သဘောနှင့် ကိုယ်ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် သင်၏အသိဥာဏ်ကို တိုးတက်စေပါတယ်။ အလုပ်အကိုင်အတိုင်ပင်ခံကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သော The Jennings Company ၏အကြီးအကဲ Kathleen Jenning က 'ကွန်ယက်ဆက်သွယ်ရေးသည် သင်သိသောအရာမဟုတ်၊ သင့်ကိုသာ သိသောအရာဖြစ်သည်' ဟုဆိုသည်။ အလုပ်အကိုင်ကွန်ယက်များဖြင့် ဆက်သွယ်နိုင်ခြင်း၊ လုပ်ငန်းနယ်ပယ်အသီးသီးတွင် ကျွမ်းကျင်သူများ၏ မိန့်ခွန်းပြောကြား ချက်များအား နားဆင်နိုင်ခြင်း၊ အလုပ်အကိုင်များတွေ့ရှိနိုင်ခြင်း (သို့) သင်လိုချင်သော ကုမ္ပဏီမှ သင့်အား အလုပ်ခန့်အပ်လိုက်ခြင်း စသော အကျိုးကျေးဇူးများစွာရရှိပါသည်။ ထိုကွန်ယက်အဖွဲ့အစည်းများကို မည်သည့်အချိန်၊ မည်သည့်နေရာတွင်မဆို ပြည်တွင်းသတင်းစာ၏ စီးပွားရေးကဏ္ဍတွင်ဖတ်ရူခြင်း (သို့) စီးပွားရေးဂျာနယ်များတွင် ဖတ်ရူခြင်းဖြင့်လည်း ရှာဖွေနိုင်သည်။ ကွန်ယက်ဆက်သွယ်ရေးအဖွဲ့ နှင့်ပတ်သက်သော web site များကိုလည်း ရှာဖွေနိုင်ပါတယ်။ ဒီအချက်အလက်များ ကိုသာ သင်ရရှိထားမည်ဆိုလျှင် ဧည့်သည်အဖြစ်သွားမည့် အစည်းအဝေးခန်းထဲတွင် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမိတ်ဆက်စွမ်းရှိသွားပြီး မိတ်ဆွေအဖွဲ့သားများအတွက်လည်း အမြဲလိုလိုမေးခွန်းများပြင်ဆင်ပြီး ဖြစ်ပါလိ့မ်မယ်။
- သင်ရှာလိုသောနာမည်ကို Search engine တွင်အလွယ်ရှာဖွေနိုင်သည်။
- သင့် ထံတွင်ရှိသော စိတ်ဝင်စားဖွယ်ဆောင်းပါးများအား forward လုပ်၍ပေးနိုင်သည်။
- ဆက်သွယ်ရေး သတင်းအချက်အလက်များကိုလည်း email ပို့၍ပေးနိုင်သည်။
- အဖွဲ့၏ message board ပေါ်တွင်ရှိသော request များအား ပြန်လည်ဖြေကြားပေးနိုင်သည်။
သတင်းအချက်အလက်များပေါ်တွင် အမှီလိုက်နိုင်ကြပါစေ။ သင့်ရဲ့ လုပ်ငန်းသည်လည်း အသိအမှတ်ပြုခြင်း ကို ခံရမည်ဖြစ်သည်။ သင်၏ကြိုးစားမှုများသည် ရောင်ပြန်ဟပ်လာပြီး စီးပွားရေး လုပ်ငန်း လည်းတိုးတက်လာပါစေ၊ သင်နှင့်သင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်အဖွဲ့အစည်းကြားတွင် ကွန်ယက် ဆက်သွယ်ခြင်း သည် မှတ်တိုင်သဖွယ်တည်ရှိနေလိမ့်မည်။
ဤဆက်သွယ်ရေး၏အကျိုးကျေးဇူးများကို သိပြီး ကွန်ယက်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဆက်သွယ်ထား လျှင် ရုတ်တရက် သင်၏မြင်ကွင်းပိုကျယ်လာပါလိမ့်မယ်။မှန်ကန်သောနည်းလမ်းများဖြင့် ဆက်သွယ်ခြင်းဖြင့် ဗဟုသုတများရရှိပြီး အဆက်အသွယ်ပေါများခြင်းတို့ကို ရရှိမည်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ဆက်သွယ်ရေးသည် သင်၏အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း၌ အဆင့်မြှင့်တင်ပေးမည့် အရာတစ်ခုပင် ဖြစ်တော့သည်။ အင်တာနက်သုံးခြင်းဖြင့် သုတ၊ ရသ နည်းပညာများ တိုးတက်လာနိုင်ကြပါစေ....
ပို့စ်ကို ရေးသားသူ yamin အချိန် Tuesday, May 10, 2011 No comments: Links to this post
မောင်လေး တစ်ယောက်ရဲ့ ပို့သတဲ့ အမေတစ်ယောက်အတွက် ရင်ဖွင့်သံလေးကို တင်ပေးပါလို့ တောင်းဆိုလာတဲ့အတွက် အားလုံး ၀ိုင်းဝန်းခံစားကြရအောင်နော်
အမေ တွေက ကျွန်နော် တို့ကို သူတို့ရဲ့ အသက်ကို အလေးမထားဘဲ မွေးဖွား ပေးခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒါကြောင့် အမေတွေကို ချစ်ကြပါ။ အလေးအနက် ထားပေးကြပါ
အမေ တွေကို ဂရုစိုက်ကြပါ။ အမေ သေသွားမှ ၀မ်းနည်း မနေပါနဲ့။ အမေ သက်ရှိထင်ရှား ရှိနေတုန်းမှာ တက်နိုင်သလောက် ပြုစုကြပါနော်.................
အနန္တဆိုတာ တိုင်းတာဖို့ ခက်ပေမဲ့
ပို့စ်ကို ရေးသားသူ yamin အချိန် Thursday, May 05, 2011 No comments: Links to this post
ပို့စ်ကို ရေးသားသူ yamin အချိန် Tuesday, April 12, 2011 No comments: Links to this post
နှစ်ကူးမှာ သင်္ကြန်ထမင်း လာစားလှည့်နော်
နှစ်ကူးတော့မယ့် အချိန်အခါသမယမှာ သင်္ကြန်ထမင်းနဲ့ လာလည်တဲ့သူအပေါင်းကို တောင်းဆုချွေရင်း ဖိတ်ကျွေးလိုက်ပါတယ်။
ပို့စ်ကို ရေးသားသူ yamin အချိန် Monday, April 11, 2011 1 comment: Links to this post
ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်း အတ္ထုပ္ပတ္တိ (၁၉၁၅ - ၁၉၄၇)
မြန်မာ့လွတ်လပ်ရေး ဗိသုကာဖြစ်သည်။ မကွေးခရိုင်၊ နတ်မောက်မြို့တွင်
မွေးဖွားသည်။ အမည်ရင်း အောင်ဆန်းဖြစ်သည်။ ၁၉၃၇ ခုနှစ် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှ
ဘီအေဘွဲ့ရသည်။ ၁၉၃၆ ခုနှစ် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ကျောင်းသားသပိတ်ခေါင်းဆောင်၊
သမဂ္ဂထုတ် အိုးဝေမဂ္ဂဇင်း အယ်ဒီတာ ဖြစ်သည်။ ဥပဒေသင်တန်း တက်ရောက်နေစဉ် ၁၉၃၈
- ၃၉ ခုနှစ် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် သမဂ္ဂ (ရကသ) ဥက္ကဋ္ဌ၊ ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ
ကျောင်းသားများ သမဂ္ဂ (ဗကသ) ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် ဆောင်ရွက်သည်။ ၁၉၃၈ ခုနှစ်
ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် အက်ဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေး ကော်မတီဝင်၊ ၁၉၄၀ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်
အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ ကျောင်းသားကိုယ်စားလှယ် ဖြစ်သည်။ ၁၉၃၈ - ၄၁ ခုနှစ်
သခင်ကိုယ်တော်မှိုင်း ဦးဆောင်သော တို့ဗမာအစည်းအရုံး အထွေထွေ
အတွင်းရေးမှူး၊ ၁၉၃၉ ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီ အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူး၊ ၁၉၃၉
- ၄၁ ခုနှစ် ဗမာ့ထွက်ရပ်ဂိုဏ်း အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးအဖြစ် တာဝန်ယူခဲ့သည်။
၁၉၄၀ ပြည့်နှစ် အိန္ဒိယနိုင်ငံ ရမ်းဂါးမြို့ အိန္ဒိယအမျိုးသားကွန်ဂရက်
ညီလာခံသို့ တက်ရောက်ခဲ့သည်။ ၁၉၄၁ ခုနှစ် ဂျပန်ပြည်သွားရောက်၍
စစ်ပညာသင်ကြားကာ ရဲဘော်သုံးကျိပ်ခေါင်းဆောင် ဗိုလ်တေဇဖြစ်လာသည်။ ၁၉၄၂ -
၄၅ ခုနှစ် ဘီအိုင်အေ ဒုတိယစစ်သေနာပတိ၊ ဘီဒီအေ စစ်သေနာပတိ၊ ၁၉၄၃ - ၄၅
အဓိပတိ ဒေါက်တာဘမော် ဦးဆောင်သော မြန်မာအစိုးရအဖွဲ့၌ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး၊
၁၉၄၅ ဖတပလ ဥက္ကဋ္ဌ၊ ဖက်ဆစ်တော်လှန်ရေး စစ်ရေးခေါင်းဆောင်၊ သရက်ခရိုင်
ရှေ့တန်းစစ်ဌာနချုပ်ကို တာဝန်ယူခဲ့သည်။ ၁၉၄၅ ခုနှစ် ကန္ဒီစာချုပ်
လက်မှတ်ရေးထိုးပြီးနောက် တပ်မတော် ဗိုလ်ချုပ်ရာထူးမှ နှုတ်ထွက်သည်။ ဖဆပလ
ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် နိုင်ငံရေး တာဝန် ထမ်းဆောင်သည်။ ပြည်သူ့ရဲဘော်တပ်ဖွဲ့ (၁၊ ၁၂၊
၁၉၄၅) ၏ ဥက္ကဋ္ဌ၊ ၁၉၄၆ ခုနှစ် ဘုရင်ခံ၏ အမှုဆောင်ကောင်စီ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌရာထူး
လက်ခံ၍ ကာကွယ်ရေးနှင့် နိုင်ငံခြားရေးဌာနကို တာဝန်ယူခဲ့သည်။ အောင်ဆန်း
အက်တလီစာချုပ် (၂၇၊ ၁၊ ၁၉၄၇)၊ ပင်လုံစာချုပ်(၁၂၊ ၂၊ ၁၉၄၇) တို့ကို
ဦးဆောင်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်။ ၁၉၄၇ တိုင်းပြုပြည်ပြု လွှတ်တော်တွင်
ရန်ကုန်လမ်းမတော်နယ်မှ ရွေးချယ်ခံ၍ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေကို
အတည်ပြုပေးခဲ့သည်။ ၁၉၄၇ ခုနှစ် ဇူလိုင် ၁၉ ရက်၌ ရန်ကုန်မြို့
အတွင်းဝန်ရုံး ဝန်ကြီးများ အစည်းအဝေး ကျင်းပနေစဉ် လုပ်ကြံခံရသည်။
ပို့စ်ကို ရေးသားသူ yamin အချိန် Saturday, April 09, 2011 No comments: Links to this post
ဂျာနယ်ကျော် မမလေး အထ္ထုပ္ပတ္တိ (၁၉၁၇ - ၁၉၈၂)
အမျိုးသမီး စာရေးဆရာမ ဖြစ်သည်။ ဖျာပုံခရိုင်၊ ဘိုကလေးမြို့နယ်
ကမာကလူကျေးရွာ၌ ဖွားမြင်သည်။ အမည်ရင်း မတင်လှိုင်ဖြစ်သည်။ ရန်ကုန်မြို့မ
အမျိုးသမီး အထက်တန်းကျောင်းတွင် ၉ တန်းအထိ ပညာသင်ယူခဲ့သည်။ ဘိုကလေးမြို့
တို့ဗမာအစည်းအရုံးဝင်၊ တက်ခေတ်အမျိုးသမီးအဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် ဆောင်ရွက်သည်။
၁၉၃၈ ခုနှစ် မြန်မာ့အလင်းသတင်းစာ တာဝန်ခံ အယ်ဒီတာ ဦးချစ်မောင်နှင့်
လက်ထပ်သည်။ ၁၉၃၉ ခုနှစ် ဂျာနယ်ကျော် ထုတ်ဝေသူ၊ ၁၉၄၆ ခုနှစ်
ပြည်သူ့ဟစ်တိုင် သတင်းစာ၊ ၁၉၄၈ ခုနှစ် ဂျာနယ်ကျော်၊ ၁၉၅၃ ခုနှစ်
ဂန္ထဝင်ဂျာနယ် ထုတ်ဝေသူအဖြစ် ဆောင်ရွက်သည်။ ၁၉၃၆ ခုနှစ်
မြန်မာ့အလင်းသတင်းစာ၌ စာစတင် ရေးသည်။ အမျိုးသမီး ကလောင်ရှင်အသင်း ဥက္ကဋ္ဌ
(၁၉၄၇)၊ မြန်မာနိုင်ငံ စာရေးဆရာအသင်း အလုပ်အမှုဆောင် (၁၉၅၀ - ၅၃)၊ ဥက္ကဋ္ဌ
(၁၉၅၅)၊ ကမ္ဘာ့ငြိမ်းချမ်းရေး ကွန်ဂရက် (မြန်မာနိုင်ငံ) ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ၊
စာရေးဆရာ စာပေကလပ် အတွင်းရေးမှူး (၁၉၆၁ - ၆၂) တာဝန်ထမ်းဆောင်သည်။ ၁၉၅၅
ခုနှစ် နယူဒေလီ အာရှစာရေးဆရာများ ကွန်ဖရင့်၊ ၁၉၅၂ ခုနှစ် တရုတ်နှင့်
ဆိုဗီယက်နိုင်ငံသွား မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုအဖွဲ့ဝင်၊ ၁၉၅၈ ခုနှစ် ဂျပန်နိုင်ငံ
ဟီရိုရှီးမား အနုမြူဆန့်ကျင်ရေးနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေး ကွန်ဖရင့်သို့
တက်ခဲ့သည်။ ထင်ရှားသော စာပေလက်ရာအချို့မှာ သူလိုလူ (၁၉၄၇)၊ မုန်း၍မဟူ
(၁၉၅၅)၊ ရင်နင့်အောင်မွှေး (၁၉၆၇)၊ သွေး (၁၉၇၃) တို့ဖြစ်သည်။ ၁၉၈၂ ခုနှစ်
ဧပြီ ၆ ရက်တွင် ကွယ်လွန်သည်။
ပို့စ်ကို ရေးသားသူ yamin အချိန် Friday, April 08, 2011 1 comment: Links to this post
အမ်အေဒေါ်အုန်း (၁၉၁၃ - ၂၀၀၃)
မန္တလေးတက္ကသိုလ် ပါဠိပါမောက္ခဖြစ်သည်။ မန္တလေးဇာတိဖြစ်သည်။
ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှ မဟာဝိဇ္ဇာဘွဲ့ကို ပါဠိဂုဏ်ထူးဖြင့် အောင်မြင်ခဲ့သည်။
ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်နှင့် မန္တလေးတက္ကသိုလ်တို့တွင် အမှုထမ်း၍ ၁၉၆၆ ခုနှစ်
အငြိမ်းစား ယူခဲ့သည်။ ၁၉၃၆ ခုနှစ် ကျောင်းသားသပိတ် အမျိုးသမီး
ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးဖြစ်သည်။ ဂျပန်ခေတ်တွင် အာရှလူငယ် အစည်းအရုံးဌာနချုပ်
အမျိုးသမီးဌာန ဥက္ကဋ္ဌ၊ စစ်ပြီးစ အထက်မြန်မာပြည် ဖဆပလအဖွဲ့၊ အမျိုးသမီးဌာန
ဥက္ကဋ္ဌတာဝန်များ ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။ ၁၉၅၃ ခုနှစ် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ကုလသမဂ္ဂ
အမျိုးသမီးအခွင့်အရေး ညီလာခံသို့ တက်ခဲ့သည်။ အမ်အေမအုန်းအမည်ဖြင့် မလောကီ
(၁၉၄၅ဝ၊ မိန်းမကိစ္စ(၁၉၄၅)၊ ဆိုဗီယက်လောက (၁၉၄၆)၊ ပါဠိစာပေသမိုင်း
(၁၉၅၆)နှင့် စရိယာပိဋကတ် အင်္ဂလိပ်ဘာသာပြန် ရေးသားခဲ့သည်။
နိုင်ငံဂုဏ်ရည်ဘွဲ့ (ဒုတိယဆင့်) ချီးမြှင့်ခံရသည်။ ၂၀၀၃ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာ
၂၈ ရက်နေ့တွင် ကွယ်လွန်သည်။
ပို့စ်ကို ရေးသားသူ yamin အချိန် Wednesday, March 30, 2011 No comments: Links to this post
ပို့စ်ကို ရေးသားသူ yamin အချိန် Sunday, March 27, 2011 1 comment: Links to this post
Myanmar New Year & Thingan Festival
Thingyan marks the changing of the old year to the new. Actually, it
is the Myanmar New Year Festival.
The Myanmar New Year usually falls on the second week of April on the
13th or on the 14th. It lasts for three or four days. It is said that
the festival period begins when the Thagyarmin, the king of the
celestial Beings, desends from his abode to the earth. Thingyan comes
when the summer's heat is at its peak. New Year is the time fro people
to cleans themselves of the defilements they might have collected
during the year and look forward toabetter life.
Time - Ahyo/ Akya/ Akyat/ Atet Day
Food - special Thingyan rice
sa-gu/ satu-ditha feeding
Flower - padauk/ngu-shwe-war/thabye-gangaw
Song - mantaung yeikkho (myananda)
tu-po tu-po/ ye-nan-tha-bin
ပို့စ်ကို ရေးသားသူ yamin အချိန် Thursday, March 24, 2011 No comments: Links to this post
တနေ့က ဆရာတော်ကြီးတပါးကို အိမ်မှာ ဆွမ်းကပ်နေတုန်း ဧည့်သည်လာတယ်ဆိုလို့
ထွက်တွေ့တော့ ဧည့်သည်က ရန်ကုန်က အမေတို့ မိတ်ဆွေများရဲ့ မြေးကလေး
မောင်နှမ ဖြစ်နေတယ်။ ဒါနဲ့ အမေက ဘယ်တုန်းက လာကြသလဲ၊ ဘယ်မှာတည်းသလဲ
မေးရင်း "အဘွား ဆရာတော်ကြီး... ကို ဆွမ်းကပ်နေတယ်၊ ကြုံတုန်း ဆရာတော်ကို
ဖူးသွားကြ၊ ၀င်ကန်တော့ကြ" လို့ ခေါ်တော့ မိန်းကလေးက "တော်ပြီအဘွား" တဲ့။
"ဟဲ့၊ ဘာလို့တုန်း" လို့ တအံ့တသြ ပြန်မေးမိတော့ "ဘုန်းကြီးနဲ့
စကားမပြောတတ်လို့" တဲ့ ရယ်လို့။
ဒီစကားကို ဒီကလေးမလေးက ရှက်ကိုးရှက်ကန်း ပြောတာလည်း မဟုတ်ပါဘူး၊
ရိုးရိုးအေးအေးပဲ ထမင်းစားရေသောက်လို ပြန်ပြောလိုက်တာပါ။ ကြားရတဲ့
အမေ့အဖို့သာ "သြော် ကလေးတွေ ဒီလို ဖြစ်နေပြီကိုး" လို့ အောက်မေ့ပြီး
စိတ်မကောင်းမိတာပါ။ ဒီကလေးမက ဒီလိုပြောတော့ သူ့အစ်ကိုလုပ်သူက ရယ်နေပါတယ်။
အမေလည်း ဆရာတော်ကြီး ဆွမ်းကပ်ရင်းတန်းလန်းမို့ သမီးများနဲ့
စကားပြောနေကြဦး ဆိုပြီး ဆရာတော်ကြီးဆီ ပြန်ဝင်လာခဲ့တယ်။
ဆရာတော်ကြီး ပြန်ကြွသွားတော့မှ သူတို့မောင်နှမကို ခေါ်တွေ့တော့
အကြောင်းကိစ္စ ထူးထူးထွေထွေ မရှိပါဘူး၊ မန္တလေးရောက်ရင် အမေ့ကို
၀င်ဖြစ်အောင် ၀င်ကန်တော့ခဲ့၊ တွေ့ခဲ့။ မာကြောင်းသာကြောင်း မေးခဲ့၊
မ၀င်ဘဲမနေနဲ့လို့ သူတို့အဖိုးအဖွားများက မှာလိုက်လို့ ၀င်လာတာတဲ့။
၀ယ်လာတဲ့ ကိတ်မုန့်တွေ၊ အဘွားစားဖို့ ယူလာရင်း ၀င်တွေ့ကြတာတဲ့လေ။
သူတို့ မိဘ၊ သူတို့ အဘိုးအဘွားက အမေနဲ့ ဦးလှတို့နဲ့
ခင်မင်ရင်းနှီးကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် မန္တလေးရောက်တဲ့အခါ အမေ့ကျန်းမာရေး
သိရအောင် ၀င်တွေ့ကြဖို့ ဆက်ဆက် မှာလိုက်လို့တဲ့။
ဘုန်းကြီးနဲ့ စကားမပြောတတ်လို့ဆိုတဲ့ ကလေးမက
ဒေါက်ဖိနပ်အမြင့်ကလေးနဲ့။ ခုပေါ်နေတယ်ဆိုတဲ့ ပြန့်ထဘီကလေးနဲ့။
လက်ဝတ်လက်စားတွေကလည်း အမျိုးမျိုး ၀တ်စားထားရဲ့။ သူ့နှမက ဘုန်းကြီးနဲ့
စကားမပြောတတ်ဘူးဆိုတာကို ရယ်နေတဲ့အစ်ကို ကလည်း ရွှေချိန်းကြိုး
အပြားကြီးနဲ့။ ဆယ်လူလာဖုံးကို လက်တဘက်ကကိုင်လို့။ ဘောင်းဘီနဲ့၊ ရှူးနဲ့။
အ၀တ်အစားတွေက ခေတ်စကားနဲ့ ပြောရရင် အပျံစားတွေပါပဲ။
သူတို့ မိဘများက ဒီခေတ်မှာ ရှာလို့ ဖွေလို့ နေရာကျနေ
စီးပွါးဖြစ်နေကြတယ်။ သားနဲ့သမီး လျှောက်လည်ချင်တယ်ဆိုလို့
ကားအကောင်းစားကြီးတစီး ဒရိုင်ဘာတယောက် ထည့်လိုက်ပြီး ခရီးထွက်လာကြတာတဲ့။
ဒီမောင်နှမနှစ်ယောက် ပြည့်ပြည့်စုံစုံနဲ့ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်
လျှောက်လည်နိုင်တာကို အမေက မုဒိတာဖြစ်ပြီး မိတ်ဆွေများ
အဆင်ပြေနေကြတာကိုလည်း ၀မ်းသာရတယ်။ ဒါပေမယ့် ဘုန်းကြီးနဲ့
စကားမပြောတတ်လို့ဆိုတဲ့ ကလေးမလေးအဖြစ်ကိုတော့ ရင်ထဲ စလုံးစခုဖြစ်ပြီး
ကျန်ရစ်ပါတယ်။ သူ့မိဘ သူ့အဘိုး အဘွား တို့ဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာတွေပါ။ ဘုရားနဲ့၊
တရားနဲ့၊ သံဃာကိုလည်း ကိုးကွယ်နေကြသူတွေပါ။ နို့ပေမယ့် အသက် ၂၀ လောက်
ရှိနေပြီဖြစ်တဲ့ ဒီကလေးမနဲ့ သူ့အစ်ကိုများခေတ်မှာ ဘုန်းကြီနဲ့ စကား
မပြောတတ်ဘူးလို့ ပြောရအောင် ရဟန်းသံဃာနဲ့ သူတို့တတွေမှာ အတော်ကြီး
အလှမ်းဝေးနေကြပြီလားလို့ အမေက စိတ်မကောင်း ဖြစ်မိတယ်။
အမေတို့ နိုင်ငံဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာတွေ အများစုနေတဲ့နိုင်ငံ၊ ဒါပေမယ့်
ဘာသာကွဲတဲ့ မြန်မာမွတ်စလင်တွေ၊ မြန်မာခရစ်ယန်တွေလည်း မြန်မာတွေနဲ့
ရောရောနှောနှော ရှိနေကြပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာ ဘုန်းကြီးရဟန်းတွေနဲ့လည်း
ဒီဘာသာကွဲတွေက စကားပြောတတ် ဆိုတတ် ရှိကြပါတယ်။ ဈေးချိုတော်ထဲက
မြန်မာမွတ်စလင် ဈေးသည်တွေများဆိုရင် ဘုန်းကြီးရဟန်းနဲ့
စကားပြောတတ်ရုံသာမက မြန်မာစကား တတ်လွန်းအားကြီးလို့ မြန်မာတွေက
လက်ဖျားခါရ သူတွေ အများကြီးပါ။ တကယ်က ဒါဟာ လူမှုရေးပဲ။ လိမ္မာရမှာ
ကျွမ်းကျင်ရမှာပေါ့။ အခုတော့ တချို့ အမေတို့ရဲ့ မြေးအရွယ်
မြို့နေလူတန်းစား ကလေးတွေဟာ ဘုန်းကြီးရဟန်းအတွက်ဆိုရင် ထမင်းမခေါ်ရဘူး၊
ဆွမ်းခေါ်ရတယ် ဆိုတာလောက်တောင် မသိကြတော့ဘူး ဖြစ်နေကြတယ်။
ဗုဒ္ဓဘာသာမိကောင်းဖခင်ရဲ့ သားသမီးမှန်ရင် ရဟန်းသံဃာနဲ့လည်း
စကားပြောတတ်ဆိုတတ် ရမှာပေါ့။ အမေတို့ လူမျိုးရဲ့ ကြွယ်ဝတဲ့
ဝေါဟာရယဉ်ကျေးမှု အဆင့်အတန်းမြင့်တဲ့ ကိုယ့်ဘာသာစကားကို ဂုဏ်ယူပြီး
စကားဆိုတာ လူနဲ့ လူချင်းဆက်ဆံရာမှာ မရှိမဖြစ် သုံးရတဲ့ဟာပါ။
အဲဒီလို ရှိရာမှာ စကားလုံး ဆင်းရဲတာ ကောင်းသလား၊ အဆင့်အတန်းမြင့်သလား၊
စကားလုံး ကြွယ်ဝတာက ကောင်းသလား၊ မြင့်သလားဆိုတာ မေးစရာတောင် မလိုတဲ့ကိစ္စ
အမေ လွယ်လွယ်ကလေးတခုကို ထောက်ပြမယ်။ အမေတို့ စကားဟာ တဦးနဲ့တဦး
ဆက်ဆံကြရင် လုနဲ့ဝ၊ ယူနဲ့အိုင် ဆိုတဲ့ နှစ်လုံးတည်းရှိတဲ့ ဝေါဟာရမျိုး
စသဖြင့် တော်ရာ လျော်ရာသုံးရတဲ့ စကားတွေ အမျိုးမျိုး ရှိတယ်။ ဒါဟာ ဝေါဟာရ
ကြွယ်ဝလို့ ဒီလို ရှိတာ။ ကိုယ့်စကားကို ရေလည်အောင် မပြောဆိုတတ်ဘူးဆိုတာ
စတိုင်လုပ်စရာ မဟုတ်ဘူး။ ကိုယ်ညံ့လွန်းရာကျတယ်။ ငယ်ရွယ်သူတွေက
ဂုဏ်ရှိတယ်ထင်ပြီး လည်း တို့ဘာသာစကားပေမယ့် တို့ကောင်းကောင်း
မပြောတတ်ပါဘူးဆိုတာမျိုးနဲ့ စတိုင်လုပ်ပြီး မပြောရဘူး။ အဲဒါ စတိုင်ကျတာ
သားတို့ သမီးတို့ကို အမေကမွေးလိုက်တော့ သားတို့ သမီးတို့ဟာ စကားပြီ
နားကြားရှိတဲ့ ကလေးလေးအဖြစ် မွေးလိုက်တာ မဟုတ်လား။ ဒါဆိုရင် လူ့အဖြစ်နဲ့
ပြည့်ပြည့်စုံစုံ၊ လုံလုံလောက်လောက် မိဘက မွေးပေးလိုက်ပြီပဲ။
သားတို့သမီးတို့က လူပီသအောင် ကြိုးစားဖို့ပဲ ရှိတော့တယ်။ သားတို့
သမီးတို့ တို့လူမျိုး တမျိုးသားလုံး ပြောဆိုသုံးစွဲနေကြတဲ့ စကားကို
သားတို့ သမီးတို့ ပြောတတ်ရမှာပေါ့။ ခုခေတ်မှာ ကိုယ့်ဘာသာစကားအပြင်
အခြားလူမျိုးတွေရဲ့ ဘာသာစကားတွေကိုတောင် တမျိုးမက နှစ်မျိုးသုံးမျိုး
တတ်အောင် သင်နေကြရတဲ့ ခေတ်မဟုတ်လား။
ပြီးတော့ အမေတို့ လူ့အဆောက်အအုံက ဂုဏ၀ုဒ္ဓိ ၀ယ၀ုဒ္ဓိ ရှိတဲ့
လူ့ဂုဏ်သိက္ခာ ကြီးရင့်ပြီး အသက်ကြီးရင့်သူများကို တလေးတစား ရိုရိုသေသေ
ပြောရတာ ရှိတယ်။ ကိုယ်နဲ့တန်းတူကို ပြောရတာ ရှိတယ်။
ကိုယ့်အောက်ငယ်ရွယ်နိမ့်ကျလို့ နှိမ့်ချ ပြောဆိုရတာ ရှိတယ်။
ဘုန်းကြီးရဟန်းကို တမျိုးတဖုံ သုံးနှုန်းပြောဆိုရတာ ရှိပါတယ်။ ဒါတွေဟာ
နှုတ်မှုရေးရာလို့ ခေါ်ပါတယ်။ စကားကို နေသားတကျပြောတဲ့ အဆင့်မြင့်မြင့်
ခုခေတ်လူငယ်တွေ ဘာသာခြား စကားများကိုလည်း တခုမက စွမ်းဆောင်နိုင် သလောက်
တတ်အောင်သင်ကြ၊ သင်နိုင်ရင် ကောင်းတယ်။ ကိုယ့်စကားကိုလည်း ပြောတတ်အောင်
ပြောကြ။ ကိုယ့်စကားမှ စုံလင်အောင်မသိဘဲ မတတ်ဘဲနဲ့တော့ ဘာသာခြားစကားကို
အမေတို့ အမေက သူ့သားသမီးတွေ နေသားတကျ ပြောဆိုတာမျိုး မလုပ်တတ်ဘူး
ဆိုရင် "ဟဲ့၊ ငါမွေးထားတာ စကားပီနားကြားပဲ။ နင် ဒါလောက် ဖျင်းရသလား" လို့
နားကလည်း အကောင်း၊ ဘာသံကိုမဆို အမှန်အတိုင်း ကြားတယ်။
လျှာတို့၊ လည်ချောင်းတို့၊ လျှာခင်တို့ ကလည်း အကောင်းမို့ ကြားတဲ့အသံကို
ပီအောင် ကိုယ်က ပြန်ထွက်နိုင်တယ်။ ဒါဆိုရင် ပြောတတ်ဆိုတတ် ရှိရပြီပေါ့။
ကိုယ့်မှာ အင်္ဂါစုံပါရဲ့နဲ့ သူများနည်းတူ ပြောတတ်ဆိုတတ်
ဒါကြောင့် သားတို့ သမီးတို့ "ဘုန်းကြီးနဲ့ စကားမပြောတတ်ပါဘူး" ဆိုတာမျိုး
ပို့စ်ကို ရေးသားသူ yamin အချိန် Wednesday, March 02, 2011 No comments: Links to this post
ရွှေဥဒေါင်း အတ္ထုပ္ပတ္တိ (၁၈၈၉ - ၁၉၇၃)
ရွှေဥဒေါင်းအမည်ခံ ဦးဖေသိန်းဖြစ်သည်။ အဖ ဦးဧရာ၊ အမိဒေါ်ရွှေတို့မှ
ဖွားမြင်သည်။ ဇာတိ မန္တလေးဖြစ်သည်။ ဖွားရက်မှာ ၁၈၈၉ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ၂၄
ရက်နေ့ ဖြစ်ပါတယ်။ သီလရှင်ကျောင်း၊ ဘုန်းကြီးကျောင်း၊
သာသနာပြုကျောင်းတို့တွင် အဆင့်ဆင့် ပညာသင်ခဲ့ပြီး ကာလကတ္တားတက္ကသိုလ်ဝင်
စာမေးပွဲကို ဖြေဆိုအောင်မြင်ခဲ့သည်။ ထို့နောက်တွင် ကျောင်းဆရာ၊ စာရေး၊
အယ်ဒီတာ စသည်ဖြင့် အလုပ်အမျိုးမျိုး ဘ၀အဖုံဖုံတွင် ကျင်လည်ခဲ့သည်။ ၁၉၁၆
ခုနှစ်တွင် ၀တ္ထုစရေးသည်။ ရွှေဥဒေါင်း၏ ပထမဆုံးဝတ္ထုမှာ ရန်ကြီးအောင်
ဖြစ်ပါသည်။ ယခုအထိ တွေ့ရသော စာရင်းအရ ၀တ္ထုရှည်ကြီး ၁၄ အုပ်ကို ဘာသာပြန်၍
၀တ္ထုရှည်ကြီး ၁၅ အုပ်ကို မှီငြမ်းပြုရေးသားခဲ့ပြီး
၀တ္ထုတိုအမြောက်အမြားကိုလည်း မှီငြမ်းပြု၍လည်းကောင်း၊ ဘာသာပြန်၍လည်းကောင်း
ရေးသားခဲ့သည်။ ရွှေဥဒေါင်း၏ ၀တ္ထုအများစုမှာ ဘာသာပြန်အမှီးများ ဖြစ်ပါသည်။
ပင်ကိုရေးဝတ္ထု ၅ ပုဒ်နှင့် ဘာသာရေးဆိုင်ရာ ကျမ်း ၅ ကျမ်း၊ အထွေထွေဗဟုသုတ
ကျမ်း ၃ ကျမ်း၊ ခရီးသွားမှတ်တမ်း ၁ အုပ်၊ ကိုယ်တိုင်ရေးအတ္ထုပ္ပတ္တိ ၂
အုပ်ကို ရေးသားပြီး ကျန်းမာရေးနှင့် ကြီးပွားရေးကျမ်း ၂ ကျမ်းကိုလည်း
ဘာသာပြန်ခဲ့သည်။ သတင်းစာခေါင်းကြီးများနှင့် ဆောင်းပါးအများကိုလည်း
ရေးသားခဲ့သည်။ ကမ္ဘာ့ငြိမ်းချမ်းရေး ကွန်ဂရက်
ဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စု သမ္မတနိုင်ငံတို့သို့ သွားရောက်ခဲ့ဖူးသည်။
မြှော်တလင့်လင့် ဖြင့် ၁၉၅၂ စာပေဗိမာန်ဘာသာပြန်ဆု၊ သွေးစုပ်မြေ ဖြင့်
၁၉၅၅ စာပေဗိမာန်ဘာသာပြန်ဆု၊ တစ်သက်တာမှတ်တမ်းနှင့် အတွေးအခေါ်များဖြင့်
၁၉၆၁ စာပေဗိမာန် သုတပဒေသာဆု ရရှိခဲ့သည်။
စုံထောက် မောင်စံရှားဝတ္ထုများသည် ထင်ရှားလှသည်။ အခြားထင်ရှားသော
အမှီးဝတ္ထုများမှာ ရူပနန္ဒီ၊ ရူပကလျာနီ၊ ပထမံဆရာသိန်းတို့ ဖြစ်ပါသည်။
၁၉၇၃ သြဂုတ်လ ၁၀ ရက်နေ့တွင် ကွယ်လွန်ခဲ့ပါသည်။
ပို့စ်ကို ရေးသားသူ yamin အချိန် Monday, February 28, 2011 1 comment: Links to this post
Frankenstein ကို ဘယ်သူရေးသားခဲ့သလဲ
ဂျီနီဗာရေကန်ကြီးရဲ့ ကမ်းခြေတစ်နေရာမှာ .... ညဉ့်နက်ပိုင်း တစ်ညမှာပေါ့။
လော့ဘိုင်ရွန်က သူ့မိတ်ဆွေတွေကို အကြံပြု ပြောဆိုတယ်။
ဘာအကြောင်းကိုလည်းဆိုတော့ သရဲ တစ္ဆေ၀တ္ထုတွေရေးဖို့ကို ပြောဆိုခဲ့တယ်။
ဒါကြောင့် ပါစီဗစ်ရှီရှယ်လီရဲ့ဇနီး မေရီရှယ်လီက ဒီ ထိတ်လန့်ဖွယ်ကောင်းတဲ့
ကြောက်စရာအလွန်ကောင်းတဲ့ Frankenstein ကောင်ကြီးကို ဖန်တီး
မွေးဖွားရေးသားခဲ့ပါတော့တယ်။ အဲဒီတုန်းကတော့ သူမရဲ့အသက်က ၁၉ နှစ်ပဲ
ရှိပါသေးတယ်။ Frankenstein ဇာတ်ကောင်ကြီးဟာ တကယ် အပြင်မှာ
အသက်ဝင်လာတယ်လို့ ထင်ရလောက်အောင် ကျော်လှိုင်ဦး ဘာသာပြန်စာအုပ်ထဲမှာ
ဖတ်ရတော့ စဉ်းစားမိတယ် အပြင်မှာသာ တကယ်လို့ ဒီလို ကိုယ်ဖန်တီးထားတဲ့
အရိုင်းအစိုင်းကောင်ကြီးဟာ ထိန်းချုပ်မှုမဲ့ပြီး အသိဥာဏ်တိုးတက်လာရင်
တော်တော်ကို ကြောက်စရာကောင်းမယ်လို့ တွေးမိတယ်။ ဖတ်ခါစက အတော် စာဖတ်သူကို
ဘယ်လောက်တောင် ဆွဲဆောင်နိုင်သလဲဆိုရင် လက်ကကို မချချင်အောင်
ဘာဖြစ်လာမလဲဆိုပြီး ထမင်းမေ့ဟင်းမေ့ ဖတ်ခဲ့ရတယ်။ ဖတ်ပြီးတော့ အိပ်တာတောင်
အိပ်မက်ထဲမှာ မြင်မက်လို့ ညသန်းခေါင်မှာ ၀ူးဝူးဝါးဝါးအော်လို့ မေမေက
ထပြီး ရေတိုက်ရတဲ့အထိ စွဲလမ်းခဲ့ရတယ်။ ကျွန်မက စာ စဖတ်ထဲက သိုင်းဝတ္ထုကို
အရင်စဖတ်ဖြစ်ပြီး နောက်ပိုင်းမှာ လှိုင်၊ မဟာ၊ စစ်နှင့်ငြိမ်းချမ်းရေး ၁၂
တွဲ၊ နောက် တက္ကသိုလ်ဘုန်းနိုင်တို့၊ ဦးနတ်စာအုပ်တွေ ဒီလို စာအုပ်တွေ
အဖတ်များလာခဲ့တော့ ခုထွက်တဲ့ စာ သိပ်မပါပဲ စာအုပ်အဖြစ် စာလုံးဖောင့်ကြီး
စာကျဲကျဲ အချစ်ဝတ္ထုတွေ မဖတ်တတ်ခဲ့ဘူး။ ဖတ်ရတာလည်း အနှစ်မရှိသလို
ခံစားရတော့ သိပ်မဖတ်ဖြစ်ဘူး။ စာအုပ်ဖတ်ပြီး ကြိုက်ရင် ထပ်ကာထပ်ကာ ဖတ်ပြီး
စာအုပ်ထဲက ဇာတ်လမ်းအထိဋ်အထိပ်က ဘယ်နေရာမှာလဲ ဘယ်အရာကို ပြောချင်တာလဲ
ဇာတ်လမ်းက ဘာကြောရိုးကိုယ်စားပြုလဲ ဒီထဲက ဘာကို သင်ခန်းစာပေးထားလဲ
စတဲ့အကြောင်းအရာကို စဉ်းစားမိတယ်။ ခုလို Frankenstein လိုမျိုး နောက်ထပ်
ရေးသားချက်တွေ သိပ်မတွေ့ရတော့ဘူးနော်။ နောက် ဒီစာအုပ်ကို အရင်တုန်းက
ကျော်လှိုင်ဦး(စာရေးဆရာမင်းကျော်) က တကယ့်ကို ထိထိမိမိရေးသားထားတာကို
နောက်တစ်ကြိမ်ပြန်ထုတ်ဖို့ ၂၀၀၄ ခုနှစ်လောက်က ထပ်မံကြိုးစားခဲ့ပေမယ့်လည်း
စာပေစီစစ်ရေးရုံးက ထုတ်ဝေခွင့်မပြုခဲ့တာဟာ ဘာကြောင့်ဖြစ်နိုင်သလဲဆိုတာ
ခုချိန်ထိ မသိခဲ့ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ဒီလို အမှန်တကယ်ကို
အပြင်မှာဖြစ်နေသကဲ့သို့ ရေးသားထားတဲ့စာအုပ်တွေ နောက်ပိုင်းမှာ
သိပ်မရှိတော့တာ စာဖတ်ဝါသနာပါသူတွေအတွက် အတော်ကို ထိခိုက်နစ်နာမိသလို
မ၀ယ်နိုင်တာလည်းပါတယ်) လို့ တွေးမိရင်း စာအုပ်ကောင်းများ
ပို့စ်ကို ရေးသားသူ yamin အချိန် Sunday, February 20, 2011 1 comment: Links to this post
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် သူတော်စင် အပေါင်းတို့....
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် တို့အတွက် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏တရားတော်တော်များကို လွယ်လင့်တကူ
နာယူမှတ်သားနိုင်ရန်အတွက် dhammadownload.com ကို 2002 ခုနှစ်မှ စတင်
တည်ထောင်ခဲ့ပြီး မြန်မာနိုင်ငံရှိ ဆရာတော်ကြီးများ ဟောကြားခဲ့သော
တရားတော်များကို OnLine Media Library အဖြစ် တင်ပြလာခဲ့သည်မှာ ယနေ့ဆိုလျှင် MP3
တရားတော် အပုဒ်ရေ ပေါင်း ၁၇ထောင်ကျော်၊ WMV ဗီဒီယို တရားတော်ပေါင်း
၄ထောင်ကျော်၊ eBooks စာအုပ်ပေါင်း တထောင်ကျော်တို့ကို စုစုပေါင်း ၆၄၀
ဂစ်ဂါဘိုက် ခန့်တင်ပြထားရာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့အတွက် ဒီဘဝနှင့်ပင် ခန္ဓာဥာဏ်ရောက်
သစ္စာဆိုက်အောင် သူတော်ကောင်းတရားများ ကျင့်ကြံ အားထုတ်ဖို့ရန်
အခွင့်ထူးကြီးပင်ဖြစ်ပါသည်။ ခေတ်နှင့် အညီ လိုက်၍ သူတော်စင်တို့၏ သွားရင်း
လာရင်း ရရှိသည့် အားလပ်သည့် မိနစ်ပိုင်းလေးတွေမှာပင် တရားတော်များနှင့်
ထိတွေ့နိုင်ရန် iPhone/iPAD နှင့် တချို့သော Mobile Device များပါ မကျန်
dhammadownload.com ပေါ်ရှိ တရားများကို နာယူနိုင်ရန် စီစဉ်ထားရှိပါသည်။
သို့ပါ၍ ဤကဲ့သို့သော အခွင့်ထူးကြီးကို လက်လွတ်မခံကြပဲ မိမိတို့
အခါအခွင့်သင့်သလို တရားတော်များကို http://www.dhammadownload.com တွင်
နာယူကြပါရန်နှင့် နီးစပ်ရာ ဓမ္မမိတ်ဆွေများကိုလည်း ဤ website အကြောင်း
သတင်းကောင်း ပါး ပေးကြပါရန် လေးနက်စွာ တိုက်တွန်း အပ်ပါသည်…
ယ္ခု လက်ရှိ dhammadownload.com တွင် သူတော်စင် ဦးရေ (နေ့စဉ်) ၁၈၀၀ခန့်၊
ဝင်ရောက်လည်ပါတ်သည့်အကြိမ်ပေါင်း (နေ့စဉ်) ၂၆၀၀ခန့်၊ တရားတော် ဒေါင်းသည့်ပမာဏ
(နေ့စဉ်) ၂၈၀ ဂစ်ဂါဘိုက် ခန့် ရှိကြောင်း အားရ ကြေနပ်ဖွယ် တွေ့ရှိရပါသည်။
သူတော်စင်များ ယခုလို အားသွန်ခွန်စိုက် တရားတော်များကို နာယူ မှတ်သား လေ့ကျင့်
နေကြခြင်းကို ဓမ္မဒေါင်းလုပ် အဖွဲ့မှ အလွန်ပင် ဝမ်းမြောက် မိပြီး သူတော်စင်တို့၏
ဖြူစင် အေးချမ်းသော ကောင်းမှု ကုသိုလ်များအတွက် သာဓု ခေါ်ဆို မိပါသည်။
*Jan/Feb 2011 တရားတော် အသစ်များ*
ဓမ္မမိတ်ဆွေ သူတော်ကောင်းများအတွက် အောက်ပါ တရားတော် အသစ်များကို
http://dhammadownlaod.com တွင် ထပ်မံ ဖြည့်စွက် တင်ပြထားပါသည်။
ဓမ္မမိတ်ဆွေအပေါင်းတို့ မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ တရားတော်များနှင့် ငြိမ်းအေးကြပါစေ…
11 Jan 2011 တွင် ပါချုပ်ဆရာတော် ကြီး ဒေါက်တာနန္ဒမာလာ ၏ ဗီဒီယို တရာတော် အသစ်
၅၄ပုဒ်ကို ထပ်မံတင်ပြထားပါသည်။ ဤဖေါ်ပြပါ Link တွင် နာယူနိုင်ပါသည်
19 Jan 2011 တွင် မြကျောက်ဆရာတော်၏ ဗီဒီယို တရာတော် အသစ် ၂ပုဒ်ကို
ထပ်မံတင်ပြထားပါသည်။ ဤဖေါ်ပြပါ Link တွင် နာယူနိုင်ပါသည်
29 Jan 2011 တွင် မိုးကုတ်မြို့ ဓမ္မရံသီဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တ သုနန္ဒ္ဒ ၏ ဗီဒီယို
တရားတော် ၁၅၄ပုဒ်ကို ထပ်မံတင်ပြထားပါသည်။ ဤဖေါ်ပြပါ Link တွင် နာယူနိုင်ပါသည်
2 Feb 2011 တွင် ဓမ္မဗျူဟာ ဒေါ်ခင်လှတင်၏ ၁၁-၅-၂၀၀၉ မှစ၍ ၄-၈-၂၀၁၀ ထိ တပါတ်လျှင်
နှစ်ကြိမ် ညနေ ၄း၃၀ မှ ၆နညရီထိ ပို့ချသည့်အထူးအဘိဓမ္မာကျင့်စဉ်သင်တန်း ဗီဒီယို
ရုပ်သံ တရားတော်ပေါင် ၁၁၃ ပုဒ်ကို ထပ်မံတင်ပြထားပါသည်။ ဤဖေါ်ပြပါ Link တွင်
လေ့လာ နာယူ နိုင်ပါ သည်
3 Feb 2011 တွင် ဓမ္မဗျူဟာ ဒေါ်ခင်လှတင်၏ အဘိဓမ္မာ အခြေခံ ပို့ချချက် ပထမအဆင့်၊
ဒုတိယအဆင့်၊ တတိယအဆင့် သင်တန်း MP3 အသံ တရားတော်ပေါင်း ၇၁၅ ပုဒ်ကို
ထပ်မံတင်ပြထားပါသည်။ ဤဖေါ်ပြပါ Link တွင် လေ့လာ နာယူ နိုင်ပါ သည်
4 Feb 2011 တွင် ဓမ္မဓရ အရှင် ကုမာရ ဟောကြားတော်မူသာ ဗီဒီယို ရုပ်သံ တရားတော်
၅၃ပုဒ်ကို ထပ်မံတင်ပြထားပါသည်။ ဤဖေါ်ပြပါ Link တွင် နာယူနိုင်ပါသည်
4 Feb 2011 တွင် ဆရာတော် ဒေါက်တာဘဒ္ဒန္တနန္ဒမာလာဘိဝံသဟောကြားတော်မူသာ MP3 အသံ
တရားတော် ၄၈၃ပုဒ်ကို ထပ်မံတင်ပြထားပါသည်။ ဤဖေါ်ပြပါ Link တွင် နာယူနိုင်ပါသည်
5 Feb 2011 တွင် ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်၊ နိုင်ငံတော်သံဃာ့မဟာနာယကအဖွဲ့မှ
ထုတ်ပြန်ထားသော ညွှန်ကြားလွှာများ၊ သံဃာ့အဖွဲ့အစည်း အခြေခံစည်းမျဉ်းနှင့်
လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို ထပ်မံတင်ပြထားပါသည်။ ဤဖေါ်ပြပါ Link တွင် လေ့လာ နိုင်ပါ
5 Feb 2011 တွင် ဓမ္မဗျူဟာ အဘိဓမ္မာ သင်တန်း ပထမ၊ ဒုတိယ၊ တတိယ အဆင့်
မှတ်စုစာအုပ်နှင့် သာသနာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ သာသနာရေးဦးစီးဌာန၊ အဘိဓမ္မာစာမေးပွဲ
ဝင်ရောက်ဖြဆိုလိုသူများနှင့် လေ့လာလိုသူများအတွက် ဓမ္မဗျူဟာ အဘိဓမ္မာ ပထမ ဒုတိယ၊
တတိယ အဆင့် ၁၉၇၆-ခုနှစ်မှ ၂၀၀၉ခုနှစ်အထိ မေးခွန်းဟောင်းနှင့် စံပြ အဖြေများကို
6 Feb 2011 တွင် မဟာဗောဓိမြိူင် ဆရာတော်ကြီး၏ ဗီဒီယို ရုပ်သံတရားတော် ၂၄ပုဒ်ကို
ထပ်မံ တင်ပြထားပါသည်။ ဤဖေါ်ပြပါ Link တွင် လေ့လာ နာယူ နိုင်ပါ သည်
6 Feb 2011 တွင် အရှင်ပုညာနန္န ၏ ဗီဒီယို ရုပ်သံတရားတော် ၁၁၂ပုဒ်ကို ထပ်မံ
တင်ပြထားပါသည်။ ဤဖေါ်ပြပါ Link တွင် လေ့လာ နာယူ နိုင်ပါ သည် ..
6 Feb 2011 တွင် မဇ္ဈိမဂုဏ်ရည် ဆရာတော် ဒေါက်တာ ကောဝိဒ ၏ ဗီဒီယို ရုပ်သံတရားတော်
41ပုဒ်ကို ထပ်မံ တင်ပြထားပါသည်။ ဤဖေါ်ပြပါ Link တွင် လေ့လာ နာယူ နိုင်ပါ သည်
8 Feb 2011 တွင် ဆရာတော် ဘဒ္ဒန္ဘဇနိတာ လင်္ကာရ၏ MP3 အသံတရားတော် ၄၀ပုဒ်ကို ထပ်မံ
တင်ပြထားပါသည်။ ဤဖေါ်ပြပါ Link တွင် လေ့လာ နာယူ နိုင်ပါ သည်
9 Feb 2011 တွင် ချမ်းမြေ့ရိပ်မြိုင်ဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တတေဇောသာရ (ပဲခူး)၏ ဗီဒီယို
ရုပ်သံတရားတော် ၅၂ပုဒ်ကို ထပ်မံ တင်ပြထားပါသည်။ ဤဖေါ်ပြပါ Link တွင် လေ့လာ နာယူ
ပို့စ်ကို ရေးသားသူ yamin အချိန် Sunday, February 20, 2011 No comments: Links to this post
ရောင်းပန်း၊ ၀ယ်ပန်းလှပြီး လာဘ်ပွင့် ကံမြင့်ဂါထာတော...
Macquarie University သို့ တိုက်ရိုက်တက်ရောက်နိုင်မ...
ကဆုန်လပြည့်နေ့ မဟာသက္ကရာဇ် (၆၈) ခုနှစ်၊ ကဆုန်လပြည်...